नेताहरुको सत्ता स्वार्थले देश सुरक्षित हुन सकेन : डा. चन्द्र भण्डारी
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७६, आईतवार १८:२०
काठमाडौं, १ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले देशका नेताहरुको सत्ता स्वार्थले गर्दा देश सुरक्षित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘देश भनेको सबैको साझा हो । देशप्रति जनता ईमानदारिता छन् । तर, नेताहरु ईमानदार भएनन् ।’ सरकारमा बसेका नेताहरुभन्दा जनता ईमानदार रहेको उनको भनाई छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालको सुरक्षा निकायपनि देशको सीमाप्रति संवेदनशील नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कोहीपनि सीमानामा देखिएनन् । सरकारले उनीहरुलाई सीमा सुरक्षाको लागि कतैपनि पठाएको छैन् । यो गम्भिर प्रश्न हो । तराई जाउँ वा उत्तरपट्टिको कोरला नाकाको कुरा होस्, पीडा छन् ।’ तराईका जनताले पनि धेरै दुःख पाएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘नेपालको सुरक्षा सरकारले वा नेपालका नेताले गरेका होईनन् । हाम्रो सीमाको सुरक्षा त नेपाली जनताले गरेका हुन् ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सुस्ता, सप्तरी, सर्लाही, कञ्चनपुर, कोरला नाका सबैतिर समस्या रहेको सुनाए । उनले भने,‘कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ बलियो उपस्थिति बनाएको छ । उसको सेनाको बलियो उपस्थिति छ । तर, नेपालतर्फ सुनसान छ । हाम्रोतर्फ ठगहरुको सलबलाहट छ । त्यही भएर सीमा मिचिएको छ।’ भण्डारीले मुलुकमा धेरै सरकार गठन भएको र धेरै प्रधानमन्त्री भएपनि नेतामात्रै धनी भएको तर देश र जनताको अवस्था दयनीय रहेको टिप्पणी गरे ।